Sina Fivarotana lozisialy fanasiana sy orinasa | Fitaovana fanamaivanana Chengxin
Ny takelaka sivana dia mahitsizoro, toradroa, boribory, herringbone, bara, lavaka ety, mahitsizoro, takelaka voninkazo, lavaka lava, lavaka telozoro, lavaka toradroa, lavaka felam-boninkazo, lavaka akorandriaka, lavaka ambaratonga hazandrano sy karazana loaka hafa.
Ny indostrian'ny masinina (metaly vy, vatosokay, fluorite, famafazana fatana famaohana, coke ary akora hafa), metaly tsyferrous, volamena, arina, indostrian'ny simika, akora fananganana ary Engineering Hydropower, fitsaboana fako maloto, fitrandrahana vato ary indostria hafa, toy ny fanasana amin'ny voa, ny fisavana, ny naoty, ny fanimbana, ny famoahana ary ny tsy fahampian-drano.
Function sy toetra mampiavaka azy
1. Ny takelaka sivana elastomer Polyurethane dia manana fanoherana tsara sy fiainana maharitra, izay mihoatra ny 10 heny amin'ny efijery vy, 3-5 heny amin'ny takelaka vita amin'ny rubber ary 2-3 ny vy tsy misy fangarony.
2. Ny vidin'ny fanjifana harena an-kibon'ny tany isaky ny taonina dia ambany noho ny takelaka sivana vy.
3. Manana fanoherana hamandoana tsara izy ary mahatohitra fanoherana.
4. Ny fitrohana ny hovitrovitra sy ny fihenan'ny tabataba dia mihoatra ny 10bb heny ambany noho ny an'ny takelaka sivana vy (harato).
5. Fanadiovana mandeha ho azy, noho ny toetran'ny vovoka faharoa polyurethane, tsy manakana ny lavaka izy io, avo ny fahombiazan'ny fitiliana.
Tombony amin'ny sivana plate sieve: rafitra tsotra, vidiny ambany, fidinan'ny tsindry amin'ny rivotra kely, fidinan'ny haavon'ny rano kely eo amin'ny lovia, fahombiazan'ny takelaka avo.
Ny fatiantoka: malefaka kely amin'ny opération, mesh kely, mora sakanana.
Mora ny manamboatra sy mamolavola azy, azo hosodokoana na hosorana, mora apetraka, fisehoana manintona, takelaka misy hateviny isan-karazany, safidy aperture sy fandaminana marobe, vokadratsin'ny feo tsara, lanja maivana, androm-piainana lava, habe marina, lava be mitafy fanoherana.
Manaraka: Moteur hozatra
Takelaka sivana Herringbone
Takelaka sivana vy mangahazo avo
Takelaka sivana avo lenta
Siseve Plate Screen
Takelaka fanasiana miendrika Y